आफैं झुक्किन्छन् सरुभक्त
जिङ्रिङ्ङ परेको कुमसम्म आउने केश, ठूलो निधार, अघिल्तिर केशविहीन तालु, पातलो फ्रेमको चस्मा, कमिज र पाइन्ट। केही समयअघिसम्म साहित्यकार सरुभक्तको हुलिया यस्तो थियो। हिजोआज उनीसँग लामो केश गायब छ। 'इन्फर्मल'...
मलेशियाको राजधानी क्वालालम्पुर जाने रहर त थियो तर चाँजापाँजो मिलिरहेको थिएन । मलेशिया त अहिले लाइम लाइटमा छ किनभने नेपाली बेरोजगार युवाहरुको लागि रोजगारीको केन्द्र बनेको छ । धेरै श्रमिकहरुको...
जो भूकम्पसँग हारेनन्
सिन्धुपाल्चोक गोल्छे–२ नाम्फाका नेत्रविक्रम सिलवाल साउदी अरबाट ४० दिनको छुट्टी लिएर चैत १२ गते घरबिदामा आए। दुई वर्षपछि स्वदेश फर्किएका उनी गाउँमा रहेका बुबा–आमालाई भेटेर काठमाडौं फर्किए। श्रीमती, छोराछोरी र...
देशको भाषा, साहित्य, कला, संगीत, नाटकलगायतका सिर्जनात्मक विधाको विकासका लागि तीनवटा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान क्रियाशील भए पनि यी निकायले के गरिरहेका छन् भन्नेबारे सर्वसाधारण त के सरोकारवालालाई पनि थाहा छैन। लोकतन्त्र आएपछि स्थापना भएका दुई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमात्र होइन, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा पनि पछिल्लो समय…
एन गोल्डस्टेन अहिले अनुवादको संसारमा सम्भवतः सबैभन्दा बढी चर्चित नाम हो। एलेना फेरान्टेको 'नियापोलिटन क्वाट्रेट' शृंखलाका चार पुस्तकले युरोप, बेलायत र अमेरिकामा मात्र होइन संसारभर प्रशंसा बटुलिरहेका छन्। यही पुस्तकमा आधारित टेलिभिजन शृंखलासमेत बन्दैछ। यो शृंखलाको त के कुरा अहिले…
आलिशालाई कथा सुन्न मन लाग्यो। आामाबाट कथा सुन्न पल्किएकी यो एघार वर्षे फुच्चीले जिद्दी गर्दै भनी, 'कथा सुनाउनुस् न आमा।' तर उसकी आमालाई आज कथा सुनाउन उतिसारो जाँगर छैन। उनको मनलाई शून्यभावले गाँजेको छ। आफ्नो पानीले बगाएजस्तो विगत, यही विगतले…
तपाईंले असाध्यै प्रेम गरेकी केटी १५ वर्षपछि एक्कासि भेटिई भने कस्तो होला? त्यो पनि सैलुनमा तपाईंकै सेवा गरिरहेको स्थितिमा? मिलान कुन्देराको उपन्यास 'जोक' यस्तै पे्रममय हार्दिक वर्णनबाट अगाडि बढ्छ। यो, त्यस्तो मनमोहक उपन्यास हो जुन पढ्दा नयाँ प्रेमिकासँग लामो सहयात्रा…
'प्रसिद्धिको बाटो धेरै चिप्लो हुन्छ, होसियारीपूर्वक हिँड्नुपर्छ, तर खुसी सधैँ रक्सिएर आउँदोरहेछ, यो मैले धेरैपटक अनुभव गरेको छु।' यही आवाजले प्रत्यक्षरूपमा बिट मारेको थियो। मैले संगीतज्ञ अम्बर गुरुङसँगको संवादमा सुन्न पाएको यही नै अन्तिम आवाज थियो।
मैथिली नाटकको स्वाद
नेपालको रंगमञ्चको मौलिकतालाई बहुलभाषा र संस्कृतियुक्त नाटकहरूले सम्पन्न बनाएका छन्। नेपालको समग्र रंगमञ्चलाई जसरी भौगोलिकरूपमा राजधानी र मोफसलका गरी दुवै प्रकारले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैगरी यसलाई भाषा–प्रस्तुतिका दृष्टिले राष्ट्रिय भाषा नेपाली र नेपालमा बोलिने अन्य सबै मौलिक राष्ट्र भाषाका नाट्यकलाका…
उसिनेको अण्डाको ३५० रुपैयाँ
काठमाडौँबाट हिँडेको दोश्रो दिन हामी रसुवाको गोसाइकुण्डमा थियौ। पहिलो दिन ६ घण्टा बस यात्रा पछि ६ घण्टाकै पदयात्रामा लखतरान परेको ज्यानले भोलिपल्ट भने केहि राहत महसुस गर्यो। काठमाडौँबाट दोश्रो दिनमै ४३८० मिटर उचाई नापियो हिँडेर। हिँड्दा होस् पुर्याटएर बिस्तारै उचाई…
नेपालमा छाँगावरोहण खेलले बिस्तारै गति लिँदैछ। हिमाल चढ्नुलाई पर्वतारोहण भनेझैं झरना(छाँगा)बाट ओर्लिनुलाई छाँगावरोहण (क्यानोनिङ) भनिन्छ। झरनाको शीरमा अँकुश गाडिन्छ। त्यसमा डोरी अड्काइन्छ। डोरी समातेर पानीमा रुझ्दै सुस्तरी झरनाको फेदमा पुगिन्छ । गाइड बिना क्यानोनिङ गर्नु हुँदैन।